တစ်ခါကနှင့် တောတန်းထဲက ခေါစာပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်ခါကနှင့် တောတန်းထဲက ခေါစာပွဲ
တစ်ခါကနှင့် တောတန်းထဲက ခေါစာပွဲ
Posted by မောင်ရိုး on Aug 30, 2013 in Creative Writing | 28 comments
၁၉၉၀ ​ကျော်​များနှစ်​​တွေဟာကျ​နော့အတွက်​ ထူးခြားတာ​တွေဆုံ​နေခဲ့ပါတယ်​ ။
ပဲခူးရိုးမကိုလည်း ဝင်​ဖူးခဲ့တယ်​ ဧရာဝတီ​ပေါ်မှာလည်း စက်​​လှေစီးခဲ့ရတယ်​ အခုလည်း …..
​ရေစီးကကြမ်းကြမ်း …. မြစ်​​ကြောင်းကတိုတို .. ဘာဆိုဘာမှ အလုပ်​မဖြစ်​ဘဲ သစ်​​ဖောင်​​မျှောဖို့​လောက်​ပဲ သုံး​လို့ရတယ်​​လေ ။
အဲဒီ​ကောင်​ ​ဒေါသကြီးလာရင်​​တော့ မြစ်​ကမ်းပါး​တွေပြိုပါ​လေ​ရော …။
မြစ်​​ကြောင်းသာတိုတယ်​ ​ပေါ်လာလိုက်​တဲ့ မြစ်​ကျိုးအင်း​တွေ …
အဲဒီအင်း​တွေကိုမှ ​လေလံဆွဲပြီး ငါးဖမ်း ငါးပိလုပ်​ကြနဲ့ သူ့ဟာသူ​တော့ ဟုတ်​​နေတာပါပဲ ….
မြစ်​နားကမ်းနား​နေတဲ့ ​တောသူ​တောင်​သား​ပေမို့လားမသိဘူး အယူ​တော့ ​အ​တော်​သည်းသဗျ ။
ဘာတဲ့ .. အင်း​ဘေးမှာ ငါးချက်​စားရင်​ ငါးကို ဗိုက်​မခွဲရဘူးတဲ့… ။
အင်းကို​လေ​လံ​အောင်​ပြီဆိုတာနဲ့ တင်​လိုက်​ရတဲ့ ​ခေါစာ …​အ​ပေါ်ပွဲ​ရော ​အောက်​ပွဲ​ရော ..
အဲ … သီတင်း ကျွတ်​​လောက်​မှာ​တော့ အင်းကိုပိုက်​ဆွဲကြပါပြီ ။ ငါးကြီးလား ငါး​သေးလား ပုဇွန်​​ရော ဘယ်​​လောက်​ပါသလဲ ???
အင်းကို ပိုက်​မဆွဲခင်​မှာ​တော့ ထုံးစံအတိုင်း အ​ပေါ်ပွဲ ​အောက်​ပွဲ​တွေလုပ်​ကြပြန်​သ​ပေါ့ ..။
တချို့က ညဖက်​မှ ပိုက်​ဆွဲကြပါတယ်​ ။ ငါး​တွေ ငြိမ်​တဲ့အချိန်​ဆို ပိုရတတ်​ပါသတဲ့ ။
ဒီလို​နေ့မျိုးမှာဆိုရင်​ည​နေ​စောင်းပြီဆိုတာနဲ့ အင်း​ဘေးမှာ ​ခေါစာ ပွဲ​တွေစီစဉ်​ကြပြန်​တာ​ပေါ့ ။
​မောင်​ဆမိရဲ့ ငယ်​​ပေါင်းရဲ​ဘော်​ရဲဘက်​တစ်​​ယောက်​က စစ်​​တောင်းမြစ်​ကမ်းနားက ရွာတစ်​ရွာကပါ ။
မရိုးဖလာ အင်း​လေလံအလုပ်​နဲ့ ရှာ​ဖွေလာကြတာ မျိးဆက်​ နှစ်​ဆက်​​ကျော်​ပါပြီ ။ ​ပြောရရင်​​တော့ သူတို့ ​တင်​​မြှောက်​ ပ သ ကြတဲ့ အစိမ်း​ကောင်​ကြီးကအကျိုး​ပေးတယ်ထင်​ပါ့ ….။
ညည ဆိုရင်​ အဲဒီမြစ်​ကျိုးအင်းရဲ့ အလယ်​မှာစိုက်​ထားတဲ့ ​ရေလယ်​တိုင်​​ပေါ်မှာ​နေတယ်​ဆိုပဲ။
​မောင်​ဆာမိက​တော့ မယုံပါဘူး ဒါ​ပေမယ့်​လည်း သူ့အရပ်​သူ့ဇတ်​ဆို​တော့ ​ပြောစရာမရှိပါဘူး​လေ ။ သူတို့ရွာကို အလည်​​ခေါ်​နေတာ​တော့ကြာပါပြီ ။ ​မော်​​တော်​ကား ၊လှည်း နဲ့ ​လှေပါစီးပြီးသွားရမှာမို့ ​တော်​​တော်​နဲ့မ​ရောက်​ဖြစ်​ခဲ့ပါဘူး ….
အဲဒီ​နေ့က​တော့ မိုးပါးစ သီတင်းကျွတ်​ပြီမို့ အ​ဆွယ်​​ကောင်းတာနဲ့ လိုက်​သွားဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​ ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်​ကျန်​ ချက်​ပလက်​ကားကြီး​ပေါ်ကဆင်းလိုက်​တယ်​ဆိုရင်​ပဲ `ဟင်း´ကနဲသက်​ပြင်းချမိတယ်​ဗျို့ ။
လမ်းကဆိုးဆိုး ဖုန်​ကထူထူ ဆီနံ့ မီးခိုး​တွေမွှန်​ထူ​နေတဲ့ အပြင်​ တဗြီးဗြီးနဲ့ မည်​ဟီး​နေတဲ့ ​မော်​​တော်​ကားစက်​သံ​တွေ​ကြောင့်​ အ​တော်​ကြီးကိုစိတ်​ကျဉ်းကျပ်​မိတာပဲ ။
သစ်​သားခုံတန်း​မှာထိုင်​ခဲ့ရလို့ ခါးရိုး​တွေနာ တင်​ပါးတွေကျိန်း နဲ့ ​မြေကြီး​ပေါ်မတ်​တပ်​ရပ်​မှ
သက်​သာတယ်​ထင်​​နေမိတာ ….။ လှည်းကြုံလာကြိုမယ်​ တဲ့ ။
နံနက်​ခင်း ၁၀ နာရီ​နေဟာ အ​တော်​​တော့ ပူ​နေပါပြီ ။ သစ်​ပင်​ရိပ်​မှာနားရင်း အသင့်​ပါလာတဲ့ ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​ကိုဖွာရင်း စပ်​စပ်​စုစု လုပ်​​နေမိတယ်​ ။ မကြာပါဘူး နွားနှစ်​​ကောင်​ဆွဲတဲ့ လှည်းတစ်​စီး​ရောက်​လာပြီး ​မောင်​ဆာမိနဲ့ အင်းသူကြီးသား သူငယ်​ချင်းကို​ခေါ်တင်​သွား​တော့တာ​ပေါ့ …။
လှည်းလမ်း​ကြောင်းခရီး​တော့ စပါပြီ ။
လှည်းမစီးဖူး​သေးတဲ့ ​မောင်​ဆာမိတစ်​​ယောက်​ လှည်း​အိမ်​​နောက်​မှာ ဟန်​ပါပါ​ခြေတွဲ​လောင်းချထိုင်​… ဆွမ်းအုပ်​တံဆိပ်​ အိတ်​စ်​ပို့ ဒူးယားကိုဖွာရင်း ပဲ​ပေးပြီးလိုက်​လာလိုက်​တာ ….
​ဟော … !! ​စ​တွေ့ပါပြီ lesson 1
လယ်​ကန်​သင်းလို ကုန်းရိုးကို​ပြေးအတက်​ လှည်းကခုန်​​ပေါက်​ပြီး ​ဆောင့်​လိုက်​တာ ​မောင်​ဆာမိလည်း ​လေးဘက်​​ထောက်​ပြီး လှည်းလမ်း​ကြောင်း​ပေါ် ​မှောက်​လျက်​လဲပါ​လေ​ရောလား ….
ရယ်​သံ​တွေ … စိုးရိမ်​တကြီးအာ​မေဋိတ်သံ​တွေကြားထဲ ကုန်းရုန်းထပြီး လှည်း​ပေါ်ပြန်​တက်​ရပါတယ်​ …..
ဒီတစ်​ခါ​တော့ ​နောင်​ကျဉ်​သွားပါပြီ ။ ဟန်​ပါပါတပ်​ထားတဲ့​နေကမျက်​မှန်​ကိုချွတ်​ပြီး လှည်းအိမ်​အလယ်​ပိုင်းက ဝင်​ရိုးအထက်​နားထိုင်​လိုက်​တာ​ပေါ့​လေ …။
ဟုတ်​ကဲ့ …. ဒုတိယမိ သင်​ခန်းစာ …..
အရင်​လို လယ်​ကန်​သင်း​ပေါ်​ပြေးတက်​တာ ဘာမှမဖြစ်​​တော့​ပေမယ့်​ လယ်​ကန်​သင်း​ပေါ်ကလည်းဆင်း​ရော ….
“ဝုန်း” ကနဲ ​မြောက်​တက်​ပြီးပြန်​ကျလိုက်​တာ မြီး​ညှောင့်​ရိုး ကျိုးမတတ်​ ။
ဒါလဲမဟုတ်​​သေးဘူး … ​နေရာမှား​နေ​သေးတယ်​ထင့်​ ။ ဒီတစ်​ခါ​တော့ လှည်းဆရာက မ​နေနိုင်​​တော့လို့ သူ့အနား​ခေါ်ထိုင်​ခိုင်းပြီး လက်​ချာ​တွေ​ပေးပါ​တော့တယ်​ ….
အင်းးး … အဲဒီ​တော့မှ ​မောင်​ဆာမိလည်း သက်​​တောင့်​သက်​သာရှိသွားပြီး နွားလှည်း ​မောင်းနည်းသင်​တန်းပါ တက်​ခဲ့ရပြန်​တာ​ပေါ့ ။
​တောအထာ ​တောဓ​လေ့ ​တောရဲ့ ပညက်​​တော်​များ …. ကြားဖူးတာလည်းရှိရဲ့ မကြားဖူးတာလည်းရှိရဲ့ …။
ယုံယုံ မယုံယုံ ပြန်​​တော့မငြင်းခဲ့ဘူး ။
သူ​ပြောသမျှ​ခေါင်းညိမ့်​ပြီး စိတ်​ထဲက​တော့ ပြန်​ငြင်း​နေမိတာ​ပေါ့ဗျာ ။
ရှူး ​ပေါက်​ရင်​ မတ်​တပ်​ရပ်​မ​ပေါက်​ရတဲ့ ​တောင်းပန်​ပြီးမှ​ပေါက်​ရမယ်​တဲ့ …. ​မောင်​ဆာမိလည်း ပြန်​​မေးကြည့်​ပါတယ်​ ။ မတ်​တပ်​ ​ပေါက်​ရင်​ဘာဖြစ်​လည်းဆို​တော့ ​တောမှားတတ်​လို့တဲ့ …
ကဲ ဟုတ်​ပါပြီ ။ ​တောမှားရင်​ ဘာဖြစ်​တတ်​လည်းဆို​တော့ … ​တောကိုင်​တတ်​တယ်​ တဲ့
လှည်းဦးဝင်​ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ပါးစပ်​က ပွစိပွစိနဲ့ ​တောင်းပန်​ပြီး ဝင်​ခွင့်​​တောင်း​နေ​သေးတာ​ပေါ့ ။
​မောင်​ဆာမိတို့ကိုလည်း စကားမမှားဖို့ သတိ​ပေးရင်း လှည်းကိုညင်​ညင်​သာသာ ​မောင်းခဲ့ပါတယ်​ ။
​မောင်​ဆာမိရဲ့​ဘော်​​ဘော်​ အင်းသဂျီးသားက​တော့ ရှုံ့မဲ့ပြ​ပေမယ်​ သူလည်း မလိုက်​နာပဲမ​နေရဲပါဘူး ..။
စိမ်းညို့ညို့​တောတန်း​လေးဟာ စဝင်​ပြီဆိုကတည်းက အ​အေးဓတ်​​ပေး​နေပါပြီ ။
​နေပူပူက​နေ ရုတ်​တရက်​ စိမ့်​​တောထဲဝင်​လိုက်​သလိုဆို​တော့ ကြက်​သီး​တော့ ထချင်​သလိုလို …..
ခင်​တန်း ရဲ့အလယ်​ကို​ရောက်​တဲ့အခါမှာ ရုတ်​တရက်​ လူစုလူ​ဝေးကို ​တွေ့လိုက်​ရပါ​တော့တယ်​ …… လှည်းဆရာက ​မေး​ငေါ့ပြရင်း အဲဒါ ​တော​ကျွေး​နေတာ တဲ့ …။
​မောင်​ဆာမိလည်း စပ်​စုချင်​တာနဲ့ လှည်းခဏရပ်​ခိုင်းပြီးသွာကြည့်​တာ​ပေါ့ဗျာ ။
မျက်​နှာညှိုး​နေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးနှစ်​ဦးရယ်​ ဦး​ဆောင်​လှုပ်​ရှား​နေတဲ့ ​ယောက်​ကျားကြီးသုံး​ယောက်​ရယ်​ လူငယ်​တစ်​စုရယ်​​ပေါ့ ။ သူ​တို့​ရှေ့​မြေပြင်​​ပေါ်မှာ​တော့ ငှက်​​ပျောရွက်​​တွေခင်းထားပြီး စတုဒီသာဘူ​ဖေး ခင်းထားပါ​တယ်​ ။
ခတ်​ညစ်​ညစ်​ဖန်​ပုလင်းနဲ့ထည့်​ထားတဲ့ ချဉ်​စုတ်​စုတ်​ ​တောအရက်​နှစ်​လုံးးး …….
​မောင်​ဆာမိတို့ ကြည်​​နေတုန်းမှာပဲ ​ခေါစာပစ်​ပွဲက စတင်​ပါ​တော့တယ်​ ….
တစ်​ချိန်​တည်းမှာပဲ ကာယကရှင်​ မိန်းမကြီးက ပွစိပွစိနဲ့​တောင်းပန်​ပြီး လာလမ်းအတိုင်း ပြန်​သွားကြပါ​တော့တယ်​ ။
လှည်းဆရာကလည်း ​မောင်​ဆာမိတို့ကို လှည်း​ပေါ်ပြန်​​ခေါ်ပြီး ခတ်​သွက်​သွက်​​မောင်းထွက်​ခဲ့​တော့တာ​​ပေါ့ ။
​မောင်​ဆာမိအ​နေနဲ့ ဘယ်​လိုဆက်​ဖြစ်​မလဲ ကြည့်​ချင်​​ပေမယ့်​ သူ့ထုံးစံက မကြည့်​ရဘူးတဲ့ ။အရှင်​ကြီးတို့စိတ်​ဆိုးပြီး ခွင့်​မလွှတ်​မှာစိုးလို့တဲ့ …..
ဒီလိုနဲ့ပဲ …… စစ်​​တောင်းမြစ်​​ဘေးက မြစ်​ကျိုးအင်းတစ်​ခုဆီကို ဆက်​လက်​ခရီးဆန့်​ခဲ့ပြန်​​ပါ​တော့တယ်​ ………..
( အင်း​ဖော်​ပွဲ နဲ့ အင်း​န​ဘေးက ​ခေါစာည ကို ​နောက်​တစ်​ပုဒ်​မှ ​ဆက်​​ရေးပါရ​စေ )
ဟီး ဟီး တောခြောက်တာ၊ တောမှောက်တာတော့ ကိုယ်တွေ့ ကိုရင်ဆာရဲ့…
ကျောက်စ်တို့ ကျောင်းသားဘဝက မဲနယ်တောင်ပေါ်မှာ လမ်းပျောက်လို့…
တောထဲမှာ ညအိပ်ခဲ့ရဖူးတယ်… ယုံရခက် မယုံရခက် လူ ၃၀ကျော်ကိုဗျာ…
ရိုးမ ​တောစပ်​မှာ​တော့ အဲသလို​တော​ချောက်​တာမျိုး ကြုံခဲ့ရပါတယ်​
တကယ်​​တော့လည်း ပြိတ္တာတို့ အသူရကယ်​တို့ ဆိုတာ​တောထဲ​တောင်​ထဲ ရှိ​နေတတ်​တာကလား
ဟီုတုန်းက​တော့ လူကြီး​တွေ​ပြောရင်​ ဟားလျင်​တာက ခတ်​များများ​လေ ……
ဦးဆာ အခုတော့ လှည်းစီးတတ်ပြီမလား
ဘယ်တော ဘယ်တောင်မှာမဆို ပိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆိုတာ ရှိတတ်တာမို့
(မရှိဘူး မပြောနဲ့ သိကြားမင်း အကုန်သိတယ် )
မကိုးကွယ်ချင်နေ မစော်ကားနဲ့ ပေါ့နော
ဒီတစ်ခါ ဘေးက ကြည့်ရတာမို့ မစုံလင်ဘူး ဆိုတော့
နောက်ထပ် ဆက်လာမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံရသော ခေါစာည ကို မျှော်နေသဗျ
ဒီ လို မျိုး မ ကြုံ ဖူး ပေ မယ့်
တစ် ကျောင်း တစ် ဂါ ထာ ဆို သ လို
သိ ပ္ပံ နည်း ပ ညာ နဲ့ တိုင်း ထွာ လို့ မ ရ တဲ့
အ ဖြစ် မျိုး တွေ ရှိ တယ် ဆို တာ
ကောင်း ကောင်း ယုံ တယ် ဗျို့ 
ကို ဆာ မိ ရဲ့ 
နောက် ပွဲ တွေ ကို ဂေ ဇက် ရောက် တဲ့ အ ခါ တိုင်း
ဆက် ဖတ် သွား မယ့် အ ကြောင်း
အဲ ဒါ အဲ ဒါ
တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလို သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့အယူအဆတွေက ခေတ်လွန်တွေမို့ ယုံရခတ်ပေမယ် တစ်ချို့ကိစ္စရပ်တွေကျတော့ တိုက်ဆိုင်တာပါဆိုပေမယ့် တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ကြတော့လည်း ယုံရမလိုလိုတောင် တွေ့ခဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါသကောဗျာ။
လူတိုင်းကတော့ အဆင်ပြေချင်ကြတာကတော့ အခြေခံပါဘဲလေ။
ဒီအ​ကြောင်း​တွေကိုယုံဖို့မယုံဖို့ဆိုတာထက်​ ဓ​လေ့ထုံးစံတစ်​ချို့ကို သိ​စေချင်​ရုံပါ
ပိုပိုသာသာလုပ်​ထားတဲ့ ထုံးစံ​တွေလည်း ပါ​နေတာ​ပေါ့​လေ …
ဇရပ် မှာ ဒီညတော့ လူစည်သွားပြီကိုး။
ခေါစာည ကို မနှေး အမြန်တင်ပါလေ ဗျား။
လာတော့လာပါမယ်ခင် ဗျ : )
ခေါစာပွဲဆိုတာ ကြတ်တွေကို ကျွေးတဲ့ပွဲလား မသိဘူး။
ဖတ်ဖူးတာ တောထဲသွားရင်း စည်ကားနေတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာကို မထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။
အဲဒီရွာဟာ ကြတ်တွေက မျက်စေ့လှည့်ပြီး အယောင်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ရောက်လာတဲ့လူတွေကို လှည့်စားဖမ်းစားတတ်တယ် ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာ။
ကဆာမိရဲ့ ကိုယ်တိုင်ခေါစာပစ်ပွဲကတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာမို့…….
နေရာဒေသ ကျဉ်းကျဉ်းတစ်ခုရဲ့ထုံးစံလေးပါ
ဒီအယူသည်းမှုတွေ ပြန့်ပွားဖို့တော့မဟုတ်ဘူး ပေါ့ 
ကြားဖူးကြုံဖူးတာလေးကို အ ပျော်သက်သက်မျှသာ
ဥဥဆာ ကားစီးဒါနဲ့ လှည်းစီးဒါဂို ကျိပီး ရွာဂို ဒဒိရတွားဒယ် …
တာထိပ် ကနေ ရွာအထိ ကားစီးရဒယ် ….
ကျောက်ခဲ ငုံတွားရင်တောင် အစာကြေလောက်ဒယ် ….
လှည်းစီးဒါဂဒေါ့ အမြင်နဲ့ဒါ ကောင်းဒါ ..
တကယ်စီးရင် သိပ်လွယ်ဘူး …
ဥဥဆာ ဒီထဲမှာ လှည်းစီးရဒါဒါ ကျိဘေဒေါ့ …
ခေါစာပွဲ အကြောင်းဂဒေါ့ ဒီထဲ အရိပ်လေးဘဲ မျင်ရဒေးဒယ် ..
နောက်ပို့စ်ဂျ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖစ်မယ် ထင်ဒယ် …
အစိမ်းဂေါင်ဂျီးက ကိုယ်ထင်များ ပြလိုက်လေမလားဘဲ ….
အန် …. ဝေါ့ ……
ကျုပ်ပေါဒဲ့ ကျောက်ခဲ က ခီညား (ဟာ) မီဟုတ်ဝူးးးးး
သူ့မေးဂွန်းဂျီးဂလည်း ကျက်တီးထချရာဂျီးးးး ဟီးးးး
ဒီမှာဆန့် တငံ့ငံ့နဲ့ ….
ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးကိုပသ ပူဇော်နေကြတာကလား ကိုရင်ဆာရဲ့
ကျုပ်တို့ကတော့ မုံ့ဆန်းနဲ့ငှက်ပျောသီးစားရလို့ ကောင်းသဗျ
ကျုပ်လည်းငယ်ငယ်တုန်းက တောစာကြွေးတာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံဘူးသဗျ
လှည်းစီးတာကတော့ လယ်ကွင်းထဲစီးရင် ကန်သင်းရိုးတွေနဲ့အော်ရပျော်ရနဲ့မို့ ရွာကိုတောင်လွမ်းမိပါတယ်။ သူတို့ဓလေ့တွေကတော့ ဘယ်သူမှဖျောက်လို့မရအောင်အရိုးစွဲနေသမို့ အသာပဲကြည့်နေရတော့တာပါပဲ ကိုဆာမိရေ
အဲဒီ ခေါစာကျွေးတယ် ဆိုတာက တကယ်တော့ အရှင်ကြီး အရှင်လေး အဆင့်မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ တကယ်တော့ အဲဒီအဆင့်ဟာ တစ္ဆေသရဲ အဆင့်တွေပါ။ အဆင့်အတန်း အင်မတန် နိမ့်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင်တော့ အရော မဝင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖြစ်တာက တောတွေမှာကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တယ်သာ ဆိုတာ အမှန်တော့ ဘုရားတောင် မှန်မှန် မရှိခိုးကြပါဘူး။ အားကိုးရာ အခံလည်း ကောင်းကောင်း မရှိတော့ ကြောက်တာနဲ့ လုပ်ကြတာပါပဲ။
ရယ်စရာ ပြောရဦးမယ်။ ကျနော့် အဘိုးလေးက ငယ်ငယ်က အရက်သိပ်သောက်တာ။ အဲဒါ သူနဲ့ သောက်ဖော်သောက်ဖက် သူငယ်ချင်းတယောက် ရှိတယ်တဲ့။ နောက် အဲဒီလူက သေပြီးတော့ ကွင်းပိုင် သွားဖြစ်နေတယ်တဲ့။ အဲဒါကလည်း သရဲ အကြီးစားပဲ။ အဲဒါ သူအရက်သောက်တိုင်း ရောက်လာပြီး သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ငယ်ထိပ်ကို လက်အေးကြီးနဲ့ လာကိုင်တော့တာပဲတဲ့။ တခြားအချိန် လုံးဝ မလာဘူး။ အရက်သောက်တာနဲ့ လာတော့တာပဲတဲ့။ နောက်တော့ အိပ်မက်ပေးတယ်တဲ့။ ဟိုမှာ သူတယောက်တည်း သောက်စရာ အဖော်မရှိလို့ ပျင်းတာနဲ့ အဖော်ရအောင် ငါ့သူငယ်ချင်းကို ခေါ်မယ်လို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ အိပ်မက်ပေးတာနဲ့ ကျနော့် အဘိုးလေး ကြောက်ပြီး အဲဒီကတည်းက အရက်မသောက်ရဲတော့ဘူးတဲ့။ ဒီတခါကျမှ မီလိုက်တဲ့ လူကြီးတွေကို အဲဒီအကြောင်း သေသေချာချာ မေးကြည့်ရဦးမယ်။
အပေါ့အလေး စွန့်တာကတော့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး မပေါက်ပဲနဲ့ တောင်းပန်ပြီးမှ ပေါက်ရမယ် ဆိုတာတော့ မဆိုးပါဘူးဗျာ။ တကယ်တော့ အဲဒါ မမြင်ရတဲ့ အဆင့်နိမ့် သတ္တဝါတွေကို ရှောင်ချိန်ရှားချိန် ပေးတာနဲ့ တူပါတယ်။
ဘုရားလက်ထက်ကလည်း ရှိဘူးတယ်။ ရဟန်းတပါးက သစ်ပင်ကို ဓားနဲ့ သွားခုတ်တာ အဲဒီသစ်ပင်မှာ နေတဲ့ နတ်သမီးရဲ့ ကလေးလက်ကို ခုတ်မိပြီး ပြတ်သွားလို့ စိတ်ဆိုးပြီး သတ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်သေးတယ်ဆိုပဲ။ နောက်တော့မှ မြတ်စွာဘုရား ရှိသေးတာပဲ ဆိုပြီး သွားတိုင်လို့ ဘုရားက သူ့ရဲ့ သိတတ်မှုကို သာဓုခေါ်ပြီး ရဟန်းတွေ သစ်ပင်ပန်းပင် မခုတ်ရဆိုတဲ့ သိက္ခာပုဒ် ပညတ်ပေးရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ဟုတ်မဟုတ်တော့သိဘူး ကျုပ်လဲ သရဲစာတော့သွားကြွေးဘူးတယ်ဗျို့….
အဲလို ကိစ္စ တည့်တည့် တော့ မဟုတ်ဘူး . .ကျုပ်ကျတော့ . . . . အောက်လမ်း . . နဲ့ တိုက်တဲ့ . . ကိစ္စ ဒီ 2012 ခုနှစ် မြို့ လယ်ကောင်ကြီးမှာ ကို ကြုံတော့တာ ဗျို့  . . . . . . . . စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ တနေ့ . . . ရေးတင်ပါဦးမယ် ဗျာ . . .။
လောလောဆယ်တော့.. မြန်မာ့မြေကသစ်ပင်မခုတ်ရ.. ခုတ်သူ … ခေါစာမကလို့.. ခေါစာရှယ်ရှယ်ဘူဖေးကျွေးလာဘ်ထိုးလည်း.. မရပဲ.. အသေဆိုးနဲ့သေစေအောင်.. ခုတ်သူ၊ယူသူ၊ပတ်သက်သူတွေဖမ်းစားပါလို့.. အဲဒီလာဘ်ပေးလာဘ်ယူ လာဘ်စားသူ..တစ္ဆေ၊သရဲ၊ပြိဿာ၊နတ်စိန်း၊ ရုက္ခစိုးတွေ အမိန့်ပေးချင်နေမိတာပဲ..
အစိုးရက.. ပြန်တမ်းထုတ်မလား..၊ မဟနက.. အမိန့်ထုတ်မလား.. တခုခုလုပ်သင့်နေပြီ…။
အရင်ကတည်းက အဲ့ဒီ တောစာ၊ ခေါစာ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆို သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ။
ဒါကျတော့ ဒီ ယိုးဒယားတို့ မလေးရှား တို့ အင်ဒိုတို့မှာလည်း ဆင်တူ ဓလေ့တွေရှိတယ် ဆာဆာရေ။
မရှိ မဟုတ်လို့တော့ ပြောရခက်သဗျ။။ ကျမ်းဂန်တွေမှာတော့ အဲဒါတွေကို မကျွတ်မလွတ် စွဲကပ်မှီတွယ်နေသူများလို့ ကိုစံလှဂျီးပြောသလို ဆိုတယ်။ ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုးနတ်တွေလည်း ရှိပါမယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက လူမိုက်ကို မျက်နှာလုပ်တော့ နေရာရတဲ့ သဘောပါ။ လူဆိုးက ကောင်းကျိုး မပေးပေမဲ့ ဖျက်ဆီးနှောက်ယှက် နိုင်တယ်လေ။ ဒီကြားထဲ ကိုယ်တိုင်က မဟုတ်တာလုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် အလွယ်အားကိုး ရှာတဲ့အခါ သူတို့ကို ပူဇော်ဆက်သ ရပါတယ်။ လောကမှာလည်း အားကိုးစရာ လူကောင်း လူဆိုး အမျိုးမျိုး ရှိသလိုပေါ့ဗျာ။ လူဆိုးထဲမှာတောင် မာဖီးယားလို၊ ယာကူဇာလို အဆင့်မြင့် လူဆိုးတွေ ရှိသေးမဟုတ်လား။ စီးပွားရေး လုပ်ရင် သူတို့နဲ့ ကင်းမရသလို ဖြစ်ပါတယ်။ အေးအေး နေသူများကတော့ ဘာသိဘာသာ နေလည်း ကိစ္စမရှိ။
လူကြမ်းရင် နတ်ကြမ်း မခံနိုင် ဆိုရိုးလို ဘုန်းရှင်ကံရှင် လူဆိုရင် သရဲမပြောနဲ့ နတ်တောင် မတားဆီးနိုင်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တောကြမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ နယ်တွေမှာ တောင်တွေမှာ ဘာသာခြားတွေ ရအောင် သာသနာပြုသွားကြတာပဲ..။ သရဲမယုံတာ သက်သက်နဲ့ ရသွားတာ မဟုတ်ဘူး… သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘုန်းကံပါလာတယ်.. ယုံကြည်မှုနဲ့ တွဲဖက်လိုက်တော့ အစွမ်းသတ္တိ မြောက်သွားတယ်။
သဂျီးတို့လို ရေရေရာရာ မသိ လေဖမ်း ဒန်းဆီး ညာသံပေး ခြေအေးဝမ်းယောင်သမားတွေက မမြင်ရတဲ့လောက တကယ်ရှိရင် သစ်တောမပြုန်းအောင် လုပ်ပါလား ဘာညာ ကန်ဒဂေါဇ လျောက်ပြောနေတာ..။ အခုမရ နောင်ရ၊ အယင်ကရ အခုလုပ်မရတာ လူစွမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာမလာနဲ့လည်း ဆိုင်သေးတယ်ဗျို့…။
သာမီးဒေါ်ဂလေးကို ရအောင်ခိုးမည့် လူဇွမ်းဂေါင်းကြောင်ကြီး :cool:
တောဘက်က ခေါစာဘူဖေးတော့မသိဝူး… တရုတ်တစေကြီးပွဲဆိုရင်တော့ လမ်းထောင့်တွေ အိမ်ရှေ့တွေမှာ သတင်းစာစက္ကူလေးတွေခင်းပြီး ပုံထားတာတော့ မြင်ဖူးတာပဲ…
တောထဲမှာဆိုရင်တော့ ကြက်သီးထစရာနော်… :hee:
အိမ်မှာတော့ ၃၇မင်းပွဲတင်ပီးတိုင်း ခေါစာပစ်တယ်..သံပုံးလဲတီးတယ်…
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အစာကျွေးပီးရင် သံပုံတီးပီးနှင်ရတယ်တဲ့
သို့သော် ခေါစာမပစ်ခင် ကိုအရင်စားရတာဆိုတော့ ကြိုက်တာဘဲသိတယ်…ဟိ